कोरोना खोप लगाउने तयारी | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal
दोबावासीको घरघरमा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा
मालिकाको नीति ः “बजारमूखी कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा दिगो पूर्वाधार–अबको यात्रा युवा स्वरोजगार”
तीन दिनसम्म देशैभर मुसलधारे वर्षा
सडक हिलाम्मे भएपछि सडकमै रोपाइँ गर्दै रणवाङका स्थानीयहरु (फोटोफिचर)
वार्षिक पुण्य तिथिमा बुबाले अक्षर चिनेको विद्यालयमा सहयोग
द्वन्द्वपीडितलाई सम्मान तथा स्मृति कार्यशाला गोष्ठी
सुन्तला खेतीले समृद्ध दोसल्ले गाउँ
जलजलाले कृषि र शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्यायो बजेट (पूर्णपाठसहित)
Home Breaking News कोरोना खोप लगाउने तयारी
काठमाडौँ, माघ ११ गते ।
नेपालमा पहिलो कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति पुष्टि भएको एक वर्षमा कोरोना (कोभिड–१९)विरुद्धको खोप आएको छ । बेलायतको अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालय र औषधि कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले विकास गरी भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको ‘कोभिसिल्ड’ नामको १० लाख खोप बिहीबार काठमाडौँ आइपुगेको हो ।
यो खोप आइपुगेसँगै यसबारे सर्वसाधारणको मात्रै नभई स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि चासो बढेको छ । सरकारद्वारा खोप वितरण, खोप लगाउने व्यक्तिलाई तालिम र खोप लगाइने व्यक्तिको छनोट जस्ता काम धमाधम भइरहेका छन् ।
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सरकारले व्यापक तयारी गरेको छ । देशभरका १५० जना खोप अधिकृतलाई स्वास्थ्य सेवा विभागले तालिम दिइसकेको छ भने बाँकी खोप कार्यकर्तालाई पनि तालिम दिने तयारी गरिरहेको छ ।
आइतबार नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका खोप भण्डारणमा कोरोनाविरुद्धको खोप पठाउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले कोरोना खोपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना खोपसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रही खोप वितरण र खोप लगाउने कार्यको तयारी गरिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मीसँग कुराकानी गरिएको छ । उहाँहरूको विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तयारी भइरहेको छ
डा. झलक गौतम
परिवार कल्याण महाशाखा, खोप शाखा प्रमुख
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने तयारी भइरहेको छ । आइतबारदेखि खोप प्रदेशमा पठाइने छ र त्यहाँको खोप भण्डारणमा राखिन्छ । त्यसपछि जिल्लामा पठाइने छ । त्यसपछि जिल्लाका खोप केन्द्रबाट खोप लगाउन सुरु गरिने छ । खोप लगाउन जनशक्ति तयारी गर्ने काम भइरहेको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा तोकेका खोप कार्यकर्तालाई मात्र तालिम दिइने छ । पहिलो चरणमा अग्रपङ्क्तिका स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, शव व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति, स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई खोप दिइने छ । अहिले खोप लगाउन सुरु गरिने दिन तोकिएको छैन । स्वास्थ्य कार्यालयले खोप दिने व्यक्तिको सङ्ख्या तय गर्नेछन् । उनीहरूलाई तालिम दिइने छ ।
खोप लगाउने तरिका एउटै हो । कोरोनाविरुद्धको खोप मासुभित्र दिइने छ । अरू धेरै फरक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छैन । खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई केही प्राविधिक कुरा मात्र भन्नुपर्ने हुन्छ । अन्य खोप घोल्नुपथ्र्याे, कोरोनाविरुद्धको खोप घोल्नुपर्दैन । पहिलेका खोप हल्लाउनुपथ्र्याे, यसलाई पर्दैन । पहिले लगाइएका नियमित खोपहरू जस्तै हो । घाममा देखाउनु हँुदैन, शीतलमा राख्नुपर्छ । तापक्रम मिलाएर राख्नुपर्छ ।
हालसम्म सातवटै प्रदेश र केन्द्रमा गरेर उच्च तहका १५० जना व्यक्तिलाई खोपसम्बन्धी तालिम दिइसकेका छाँै । जुन व्यक्ति नेतृत्व तहमा रहेको छ, त्यस व्यक्तिलाई तालिम दिइएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले तोकेका खोप कार्यकर्तालाई भने तालिम दिइने छ ।
१८ वर्ष माथिकालाई मात्रै खोप
खोप अधिकृत तथा प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालय, म्याग्दी
कोरोनाविरुद्धको खोप अन्य खोपजस्तै भए पनि नयाँ खोप भएकाले केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । नियमित खोप दुई वर्षभन्दा मुनिका बच्चालाई दिइन्थ्यो भने कोरोना भ्याक्सिन १८ वर्ष माथिका उमेर समूहलाई मात्र दिइने छ । नयाँ भएकाले खोप लगाइसकेपछि देखिनसक्ने प्रतिकूल असरबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ । खोप लगाइसकेपछि आधा घण्टा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । निगरानीमा राख्ने ठाउँको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । खोप लगाउनुअघि खोप लगाइने व्यक्तिको मेडिकल हिस्ट्री लिइने छ । उसको प्रतिरोधात्मक क्षमता कस्तो छ भनेर पहिचान गरिन्छ ।
‘मेडिकल हिस्ट्री’ महìवपूर्ण
प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालय, बर्दिया
कोरोना भाइरस विश्वकै नयाँ हो र यसविरुद्ध आएको खोप पनि बिल्कुलै नयाँ भएकाले यसप्रति सर्वसाधारण मात्र नभएर स्वास्थ्यकर्मीको चासो छ । तालिम दिने, खोप लगाउने कार्यको तयारीमा लागिएको छ । खोप लगाइने व्यक्तिको पनि पहिचान भएको छ । गर्भवती, कुनै पनि एलर्जी भएका व्यक्तिले खोप लगाउनु हँुदैन ।
नियमित खोपमा केही पनि सोधिँदैन थियो । कोरोनाविरुद्धको खोपमा उसको मेडिकल हिस्ट्री महìवपूर्ण छ । मेडिकल हिस्ट्रीदेखि, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, अन्य रोग, एलर्जी छ, छैन भनेर प्रस्ट हुनुपर्ने हुन्छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
रघुगंगामा ४६ करोड ८६ लाख २५ हजार बजेट सार्वजनिक
धवलागिरीले ल्यायो ४० करोड ४९ लाख ४९ हजारको बजेट